Waraysi: Ubax C/qaadir oo u sharaxan golaha deegaanka Oslo,Norway | Somaliska
Waraysi: Ubax C/qaadir oo u sharaxan golaha deegaanka Oslo,Norway
Waraysigaan soo socda waxa aan la yeeshay Ubax C/qaadir oo u sharaxan golaha deegaanka magaalada Oslo ee dalka Norway. Doorashada ayaa lasoo afjari doonaa 12-ka bisha september 2011. Haddaba anigoo ah C/risaq Maxamed Xuseen, aqoonyahan degan Sweden, isla markaasna ah qoraa wax ka qora arimaha bulshada ayaan waraysigaan la yeeshay Ubaxa C/qaadir. Ujeedada wareysigu waxaa weeye in guud ahaan dadka soomaaliyeed gaar ahaana dadka soomaaliyeed ee reer Norway si fiican loogu sharaxo barnaamijka siyaasadeed ee ubax C/qaadir. Ubax waxaa ay u sharaxan tahay xisbiga shaqaalaha, waxaana ay kaga jirtaa booska 49 àad. Waraysiga oo meelo badan taabanaayey waxaa uu u dhacay sidatan.
Su àal: Waxaad warbixin kooban naga siisaa waxbarashadaada , wakhtiga aad Norway timid iyo waxyaalaha ugu waaweyn ee kugu dhaliyey inaad siyaasada Gasho?
Ubax C/qaadir: waxaan dalkaan imid 1994. Waxaan dhanka waxbarashada ee Soomaaliya kusoo qaatay ila dugsi sare,anigoo ka baxay dugsigiii sare ee jamaal cabdinasir ama Allahi-da loo yaqaaney. Markaan Norway imidna waxaa ay noqotay inaan dib u bilaabo waxbarashadii oo dhan si aan heer jaamcadeed u gaaro. Nasiib wanaag dadaal dheer ka dib waxaan galay jaamacad, waxaana bartay maamulka dhaqaalaha ee hayàdaha dowliga ah. Waxaan kaloo bartay maadooyin kale oo ay ka mid yihiin waxbarista bulshada ( social pedagogik) iyo weliba maamulka,hogaaminta mashruucyada iyo talo bixinta.
Dhinaca siyaasada hadaan ka hadlo, weligey waxaa aan xiiseyn jirey arimaha siyaasada. Waxaana jeclaa inaan saameyn ku yeesho go àamada ku wajahan arimaha bulshada. Siyaasada dalkan Norwey waxaa aan si toos ah u bilaabay sanadkii 2004-ta. Arimaha ugu waaweyn ee igu kalifayna waxaa ka mid ahaa; ka dib markii aan arkay in xuquuq badan oo guud ahaan dadka ajnebiga ahi leeyihiin, gaar ahaana soomaalida ay maqan tahay. Waxaan arkay in dadka ajnebiga ah si quursi ku jiro arimahooda loo wajaho. Waxaan arkay in marwalba laga hadlo lana falanqeeyo meelaha aan ka liidano balse aan inta badan lasoo qaadin meelaha aan ku xoogan nahay. Waxaan arkay in guud ahaan dumarka ajnebiga ah gaar ahaana dumarka muslimiinta ah si aan sharciga waafaqsanayn marar badan loola dhaqmo, xuquuqdoodana aaney inta badan heli karin. Waxyaalahaas oo dhan kolkii aan isu geeyey waxaa ii muuqday in meesha ugu muhiimsan ee isbedel laga suurto gelin karaa ay tahay dhinaca siyaasada. Maxaa yeelay go àamada saameynta bulshada ku leh intooda badan waa kuwo siyaasiintu gaaraan. Sidaas awgeed ayaan go àansaday inaan si toos ah siyaasada uga qayb qaato si aan arimahaas aan ku soo sheegay wax uga bedelo.
Su àal: Haddii laguu doorto golaha deegaanka Oslo, sidee ayaad wax uga qaban kartaa arimaha dhinaca shaqada maadaama ay soomaalida badankood ku adag tahay iney suuqa shaqada soo galaan?
Ubax C/qaadir: Waxaa jira arimo badan oo keenay in ay soomaalida ku adkaato dhinaca shaqada.Arimahaas ayaan kuwa ugu muhiimsan soo qaadanayaa, waxaana raacinayaa sidii aan wax uga qaban lahaa:
Wacyi gelin loo sameynaayo shaqo bixiyayaasha: Shaqa bixiyaasha, kuwa dowlada iyo kuwa gaarka loo leeyahayba waxaa ay fikir inta badan qaldan ka qaateen dadka soomaalida ah.
Tusaale ahaan inaan nahay dad aan tacliin lahayn, dad leh dhaqan adag, dadka ka yimid dagaal oo maskaxdoodana dagaalkaasi saameyn ku yeeshay. Fikirkaas intiisa badan qaladka ah waxaa uu dhaliyaa in kuwa shaqada bixiyaa ay shaki ka qaadaan dadka soomaaliyeed. Sidaas darteed waxaa ay in badan doortaan in aaney shaqaaleyn soomaalida. Haddaba in badan farta ayaa leynagu soo fiiqaa, waa la ina eedeeyaa iyadoo aan inta badan wax cad oo xaqiiq iyo cilmi baaris ku saleysan la haynin.
Haddaba haddii la I doorto waxaa aan xooga saari doonaa wacyi gelin ku wajahan shaqo bixiyayaasha. Degmada ( kommun-ka) ayaa ah shaqa bixiyaha ugu weyn ee dad inta badani u shaqeeyaan. Hadaan doorashada ku guuleysto waxaan ka mid noqon doonaa maamul degmadeedka, ka dibna anigoo dhinaca siyaasada maraya ayaan muujin karaa in soomaalidu yihiin dad shaqaysta, fikradaha laga aaminsan yaheynba aaney sax ahayn. Taa hadaan ku guuleysto waxaan qabaa iney u horseedi doonto in dad badan oo soomaali ahi shaqo helaan.
In dadka soomaaliyeed oo loo diyaariyo suuqa shaqada: Dadka soomaalidu waxaa ay u badan yihiin dad aan wax badan deganayn Norway sidaas darted waxaa ay u baahan yihiin warbxin dheeraad ah oo ku saabsan nidaamka shaqada iyo shaqo raadinta ee dalkan Norway. Taasna qayb libaax ayaan ka qaadan doonaa insha allah.
Waxaan rajeyn inaan hadaan soomali nahay iska caawino dhinaca warbxinta ku saabasan arimaha shaqada, waxyaalaha la iska doonaayo, waxyaalaha qofku sameyn karo ka hor inta aanu gacanhayaha la kulmin iyo guud ahaan inaan fahamno qaabka suuqa shaqada Norway. Arintaas waan doonayaa inaan anigu shakhsiyan wax ka qabto, anigoo kaashanaaya aqoonyahano soomaaliyeed. Waxaan ku dadaali doonaa in xaafad walba ee ay dadka soomaalidu ku badan yihiin laga hirgeliyo “ jobb center på somaliska”. Waa xarun yar oo aqoonyahano soomaaliyeed joogaan dadkana lagu siiyo warbxin ku saabsan qaababka kala duwan ee shaqada. Howshaas waxaa ay ka mid noqon doontaa howlaha ugu muhiimsan ee aan qaban doono insha allah. Maxaa yeelay in dadkeena soomaaliyeed shaqo helaan wax weyn bey ka bedeleysaa fikirka ay dad badan oo dalkaan Norwey u dhashay ay inaga haystaan. Shaqadu waa furaha albaabo badan oo dhinaca arimaha bulshada ah.
Su àal: Xagga arimaha iskuulada iyo guud ahaan tacliinta dhalaanka soomaaliyeed maxaad ka qaban kartaa, haddii lagu doorto?
Ubax c/qaadir: Iskuulada runtii dhib weyn ayaa caruurta soomaaliyeed iyo waalidkaba ka haysta. Waxaa jirta xuquuq badan oo ilmuhu leeyihiin oo maqan. Waxaa jira wax badan oo waalidku xaq u leeyahay oo inaga maqan ama uusan aqoon. Dhibta ugu badan waxaa uu soo gaaraa caruurta ilaa 14 jirka ah kolka ay Norway yimaadaan. Waxaa dhici karta inaan ilmahaasi wax iskuul ah soo dhigan ama uu waxyar soo dhigtay. Waxaa dhacda in iskuuladu ardaygii oo aan luqadii wax badan ka aqoon loo gudbiyo fasalo caadi ah, oo lagu dhex tuuro dad luqadii iyo maadooyinkiiba ka badiya. Taasina waxaa ay keentaa in ardaygii uu aad u niyad jabo ka dibna uu doorto inuu iskuulkii iskaga tago ama uu goysmo iyo waxii la mid ah bilaabo.
Haddba waxaa aan doonayaa inaan maamulka waxbarashada degmada ka dhaadhiciyo in ardaydaas heerkooda luqadeed iyo aqooneedba la dhiso inta aan horey loo sii gudbin. Waxaan aad ugu dadaali doonaa in aan si cilmiyeysan u muujiyo dhibaatada ardaydaas aan kor ku soo sheegay lasoo gudboonaata.Waxaan kaloo ku wacyi gelin doonaa in haddana dabagal lagu sameeyo arinkaas si loo hubiyo in sharciga tacliinta u degan la raacay, si arday walbaa uu xuquuqdiisa u helo. Waxaan kaloo qaybta tacliinta kala hadli doonaa in waalidka soomaaliyeed u baahan yahay warbixin dheeraad ah oo ku saabsan nidaamka iskuulada iyo manhijka dalka u degan maadaama uu yahay mid ka duwan nidaamkii iskuulada ee Soomaaliya.
Waxaan kaloo aan doonayaa in aan inagu haddaan soomaali nahay isa siino warbixin ku saabsan iskuulada iyadoo dadkii horey u joogey ee fahmey qaabka iskuulada ay khibradooda la qaybsadaan dadka cusub ee aan weli fahmin nidaamka tacliineed ee dugsiyada Norway. Waxaan ku talo jiraa inaan hay `da isdhexgalka u gudbiyo nidaam aan ugu magic daray “nidaamka kala faa ìideysiga” taas oo macnaheedu yahay in reer horey u deganaa oo soomaali ah uu xiriir iyo wada shaqeyn la yeesho reer cusub oo soomaali ah. Labada reer waa ay kala faa ìideysanaayaan. Waxaana ay isdhaafsanayaan khibrad iyo waayo aragnimo kala duwan.
Su àal: Haddii laguu doorto golaha deegaanka Oslo, sidee ayaad wax uga qaban kartaa dhinaca hayàdaha arimaha caruurta maamula (barnevem) kuwaas oo waayadaan dame uu iyaga iyo soomaalida isfaham la`aan xumi ka dhex taagan tahay?
Ubax c/qaadir: Waa ay jirtaa isfaham laàantaas iyo xadgudub weliba marar badan dhaca.Waalidka soomaaliyeed waxaa ay doonayaan iney ilmahooda korsadaan, kuna barbaariyaan koriimo waafaqsan dhaqanka iyo diintooda. Hay`ada arimaha caruurtuna waxaa ay aaminsan tahay in ilmuhu ay dhib qabaan oo aan walidku koriimo u qalanta uusan siin.
Waalidkii arinkaasi wel-wel badan ayey ku keentay, taasoo dhalisay in caruur badani ay welwelkaas ka faaìideystaan iyagoo waalidku ugu goodinaaya – haddii aadan waxaas iyo waxaas ii sameyn qolooyinka caruurta qaata baan kuu sheegayaa. Waalidiin badan ayaa run ahaantii guryahoodii ku noqday la hayste. Waxaa dhacda in hooyo iyadoo daalan inta ilmaheeda ay cunto u kariso, balse nasiib daro uu ilmihi diido cuntadaas, uuna yiraahdo waxaan rabaa Pizzo ee orod iis oo gad. Markaana ay hooyadii piizo soo gado. Iyadoo ka cabsi qabta in qolooyinka caruurta qaataa meesha soo galaan. Hooyadu dadaal bey ka wadaa, balse shaqaalaha hay`da curuurta ayaa ficilkaas hooyada u turjunta masuuliyad xumo. Waxaa dhacda in arimo noocaas oo kale ah lagu qaado caruur badan. Dadaal badan ka dib oo aan anigu ka ahaa qayb, waxaa uu dhaliyey in dhinaca dowlada waxuun isbedel ahi ka yimaado. Waxaa dib loo eegey nidaamkii waxbarashadii hay`ada oo waxaa lagu soo daray waxbarashada iyo is dhexgalka dhaqamada kala duwan. Waxaa kaloo la doonayaa in la shaqaaleeyo dad jinsimo kala duwan leh si looga hortago isfaham xumada.
Waxaa dhiman in isbedel lagu sameeyo dhinaca guryaha. Haddaba waxaan ku dadaali doonaa in kor loo qaado aqoonta waalidka soomaaliyeed, lagana dhiso meelaha ay isfaham laàntu ka imaan karto. Waxaa inala gudboon haddan nahay waalidka soomaalida inaan fahamno kala duwanaanshaha qaabka korinta caruurta ee dalkeenii hooyo iyo wadankan aynu nimid. Waxaa muhiim ah in waalidka iyo ilmuhu xiriir fiican yeeshaan oo ay wada hadlaan, waxyaalo badana isla meel dhigaan, weliba kolka ilmuhu soo gaaro da`da dhowr iyo tobanaadka.Si aan waalidka soomaaliyeed arimahaas xagga caruurta ah uga saacido waxaa aan soo qaatay kooras la yiraa: ICDP-International child development program ama barnaamijka caalamiga ee horumarinta caruurta. Barnaamijku waxaa uu xooga saarayaa wadahadalka ka dhexeeya ilmaha iyo waalidka iyo abuuritaanka xiriir wanaagsan iyo kalsooni buuxda. Waxaan diyaar u ahay inaan u faa`iideyo waalidiinta soomaaliyeed ee barnaamijkan xiiseyneysa. Sidaan horey u soo sheegay iskaashigaas dhexdeena ah iyo kala faaìideysasho ayaan wax badan ku xalin karnaa, dhib badana kaga badbaadi karnaa.
Suàal: Qorshaha makuugu jiraa xoojinta iyo kor u qaadista afka hooyo?
Ubax C/qadir: Haa, waxaan doonayaa in barashada afka soomaaliga la xoojiyo. Maxaa yeelay waa arin muhiim ah. Cilmi baaris badan ayaa waxaa ay caddeysay in ardayda luqadiisa hooyo yaqaan ay u sahlan tahay inuu barto luqadaha kale iyo weliba maadooyinka kale. Waxaa dhacday oo aanu aragnay waalid iyo ilmihiisii oo isfahmi waayey, oo ilmihii ku hadlaayo Norwegian hooyadiina ay soomaali ku hadleyso. Haddaba si aan taasi u dhicin waxaan ku dadaalayaa in lacag dheeraad ah la geliyo barashada luuqada hooyo iyo weliba kor u qaadista tayada macalimiinta dhiga afka hooyo. Waxaa jira dad badan oo soomaali ah oo macalimiin hore ahaa, balse aan shahaado haysan. Waxaan ku dadaalayaa in dadkaas laga qaado imtixaan qiimeyn ah ka dibna loo ogolaado iney iskuulada wax dhigaan.
Suàal: Dalkii hooyo ee soomaaliya ma jiraa wax qorshe ah ee aad ugu talo gashay?
Ubax C/qaadir: Hadda waxaan ka shaqeynaayey wax ka qabashada arimaha abaaraha . Waxaan bilaabay anigoo kaashanaaya ururka laanqeyrta cas ururin lacageed. Haddana lacagtaas wey badatay, waxaana loo dirayaa soomaaliya. Dhamaanteen meel aan joognoba inaan arinkaas u istaagnaa waa muhiim. Waana arin diinteena suubani ina fareyso.
Howlo kale oo badan oo dalkii soomaaliya wax loogu qabanaayo ayaan wadaa. Bishii febaraayo 2011-ka ayaan tegey soomaaliya, waxaana arimo badan kusoo sameeyey baaritaan ( research), ka mid ah dhinaca tacliinta, doorka dumarka iyo hooyooyinku bulshada ku leeyihiin iyo waxyaalaha ay u baahan yihiin. Maadama ay Norway tahay wadanka ugu horeeya xagga kaalmeynta barnaamijyada horumarinta haweenka, waxaan la xiriiray hay`daha arinkan ka shaqeeya. Waxaana u sharaxay baaritaankii aan soo sameeyey iyo sida lagu kaalmeyn karo hooyooyinka. Sida lawada ogsoon yahay dumarku waa lafdhabarta horumarka wadanka. Sidaas darted waa iney helaan wacyi gelin iyo tacliin si ay howshooda si waxtar leh ugu qabtaan. Waxaan doonayaa inaan hayàadkaas ku dhiiri geliyo kalana shaqeeyo sidii wax loogu qaban lahaa oo kor loogu soo qaadi lahaa dumarka iyo caruurta waxbarashadooda iyo caafimaadkooda.
Su aal: Ugu damayn,`maxaad soomaalida kula dardaarmi lahayd ama aad usoo jeedin lahayd?
Ubax C/qaadir : waxaan usoo jeedin lahaa in aan doorashada ka qayb qaadano oo aan muujino codkeena.Haddii aynaan doorashada ka qayb qaadan oo aynaan codkeena dhiiban waxaan fursad siineynaa xisbiyada cunsuriga ah ee doonaaya ineynaan dalkaan ku noolaan, waa xisbiyo ka soo horjeeda jiritaankeena oo idil. Tankale waxaan soomaalida usoo jeedinayaa in aan iska xilsaarno, iskuna duubnaano si aan magaceena sharaftiisa u wada ilaalino.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Ubax c/qaadir.
C/risaq Maxamed Xuseen